Nidaamka Qaranka ee Maamulka Hantida SINAP - Geofumadas
Disember, 2016 Featured, Geospatial - GIS, egeomates My, Maamulka Land
Nidaamka Qaran ee Maamulka Hantida (SINAP) waa madal technology in midaynaysa dhamaan macluumaadka la xiriira khayraadka jirka iyo sharciyeed ee qaranka, halkaas oo dadweynaha kala duwan, jilayaasha gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaad u qoraan oo dhan xawaalad la xiriira alaabta a hantida lagama maarmaanka u ah aasaaska iyo soo nooleynta suuq ah.
Sawirka ku yaala midigta ayaa la arki doonaa meel, sababtoo ah waa wax xayeysiin ah maalin maalmaha ka mid ah oo aan ku sameeyey waqtiga firaaqadeyda LADM, mid ka mid ah bandhigyada Amsterdam, waxaa ku jira 2012.
SINAP waxay ku dhalatay Honduras oo ku jirtay 2002-2005, oo ay ku jiraan barnaamijka Maareynta Dhulka, oo la mid ah kuwii ku soo barbaaray wakhtigaa oo ku yaal dhowr dal oo leh taageero dhaqaale ee Baanka Adduunka. Ma ku dhashay sida waxyoonay shisheeye, isaga oo Aasaaskiisu wuxuu ku jiraa aragtiyaha ay classical in taageero noocyo horumarinta halkaas oo la taliyayaal xubno horumarinta suuqa yihiin, oo dhinac ah hoos u dhaca qiimaha wax soo saarka(alaabta ceeriin, ilo dhaqaale, tiknoolijiyad iyo caasimad) iyo, dhinaca kale, hoos u dhaca qiimaha macaamilka. Sidaa darteed, marka la eego dhibaatada yaraynta kharashka wax soo saarka wadankan soo koraya, xadka ugu weyn ee SINAP waa dhimista kharashka iyo waqtiyada waxqabadka.
SINAP ma aha qalab kombuyuutar ah, laakiin dhowr siyaasado oo ay ku jiraan horumarinta teknoolajiyada, isdhexgalka jilayaasha hay'adaha ku xiran maaraynta dhulka iyo fududaynta hababka iyada oo la jaanqaadaysa isbeddelada caalamiga ee heerarka iyo isticmaalka tignoolajiyada macluumaadka iyo isgaarsiinta.
SINAP waxaa conceptualized marka ay jirto caddayn ku filan in kaliya la hirgeliyo technology aan bedelayaan ee xaafadaha sharciyeed iyo hay'adaha dhow yahay sida gelinaya on Taayirada faras, halkii la dhigaayo gaari cusub. Sidaas istaraatijiyad waxaa ku weheliyay isbedel xagjirka ah oo ay ku jiraan abuurka ah ee sharciyada cusub sida Sharciga Hantida iyo sharcigu waxay wax ku Qorshaynta Territorial; under this aasaaska sharci Machadka Property, oo isu keena Diiwaanka Land (kaasoo Maxkamadda Sare waxaa iska), Cadastre Qaranka (kaas oo ahaa Agaasimaha Guud ee hoos Madaxweynaha) iyo Institute Geographic Qaranka loo abuuray ( taas oo ku xiran Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Gaadiidka).
hay'ad cusub waa Agaasinka a of Records, Directorate of a Cadastre iyo Juqraafiga iyo nidaamiyo cinwaanka hoos indhaha ah diiradda on-keenidda by Xarumaha Associated siin kara degmooyinka ama hay'adaha hoos iskaashiga dawladda iyo kuwa gaarka ah.
SINAP waxay ku dhalatay iyada oo hoos imaaneysa Qeybta Diiwaanka Diiwangalinta Dakhliga (CCDM), dukumiinti xilligaasi waxay ahayd abbaaro ka mid ah Christiaan Lemmen iyo geofumadas kale oo raba in ay soo bandhigaan habka Cadastre 2014.
CCDM ee 2012 noqday LADM ah (ISO-19152), laakiin ka dibna (2002) hore u ahaa fikirka ku filan baaluq of sida wax u shaqeeyaan maamulka dalka ay la fududeeyey laga yaabaa in xidhiidhada sahlan ee Law, Xakamayn iyo Masuuliyada (RRR ) ka mid ah daneeyayaasha (Party) iyo waxyaabaha diiwaanka (BAUnits), iyo weliba dalka sida xiriirka ka da'ayeen shayada iyo khariidaynta sida xubno ka mid ah sharciga guud ee saamaynaya sharciga gaarka ah.
Tani waa qaabka fikradda ee SINAP sanadka 2004; la taxane ah oo qanjidhada transactional oo wakhtigaas xarooda: SINIMUN degmooyinka, INTUR for waaxda dalxiiska, SINIA Deegaanka, SNGR maaraynta khatarta, CIEF waayo iyo INFOAGRO for waaxda beeraha.
Calaamadda dhinaca midigta ah waa mid aniga iigu soo koobay si dib loogu eego 2012, isagoo daryeelaya aqoonsiga mid ka mid ah. Soo koobid, SINAP waa mashruuc isku xira ugu yaraan afar qaybood oo hoose:
Nidaamka Unified Unified System of Records.
Nidaamkan waxaa ka mid ah diiwaan gelinta kale, hantida dhabta ah iyo diiwaanka cadawga oo ah xaqiiqo dhab ah. Waxaa loola jeedaa in Baakadaha ka koobnaan howlgal dhamaystiran oo territory, labadaba guryaha gaarka loo leeyahay in ay ku farxayaa in ay beeraha ka diiwaan gashan hoos farsamo dhabta folio iyo sidoo kale alaabo bulshada sida wadooyinka iyo Wabiyaal lala sheet maamulka. Intaa waxaa dheer, waxay Dhagri ku fikiri interesecto sida affectations soo gaaray by khariidaynta taas oo uu leeyahay link a si sharciga dadweynaha, iyo sidoo kale goobaha daadka, meelaha la ilaaliyo, goobaha taariikhiga ah, iwm
SURE kuma koobna oo kaliya mulkiilaha; waa agnostic si tartiib tartiib ah u dhexgaliso alaabta kala duwan ee qaranka; hadda waxaa ku jira hantida ganacsiga, awoodaha, garashada iyo gawaarida.
Nidaamka Macluumaadka Dhulka ee dhulka (SINIT)
Nidaamkan diiwaanka iyo publicizes dhammaan macluumaadka wadci soo saaray hay'adaha kala duwan ee dalka iyo in la abuuro adeegyo qiimo-daray heli karo si ay dadka isticmaala ka yar hal nidaam qiyaas. Intaa waxaa dheer publicita macluumaad da'ayeen door ah oo bakhaar macluumaadka si looga fogaado khasaare macluumaadka soo saaray hay'adaha dawladda iyo in ay u adeegaan sida Guntin ah ee daabacaadan kuwa aadan ayaa loo baahan yahay si ay ugu adeegaan warbixinta soo saaray kaabayaasha.
Diiwaangelinta Nidaamyada Isticmaalka Dhulka (RENOT)
Tani waa diiwaan-galinta dhammaan xeerarka ku jira sifooyinka saameyn ama faa'iido u ah isticmaalka, domainka ama qabashada bakhaarada. Isha of rikoorka uu la xidhiidho Sharciga Maamulka Dhulka, doonaya inay qorshaha maamulka iyo xeerarka si dadweynaha in ay curiyaan hay'adaha kala duwan waxay noqon kartaa enforzables iyo ka muuqataa sida masuugin on Baakadaha ee xafiiska ama shahaadada cadastral, iyo sidoo kale maareynta nidaamyada ama caddaynta guryaha ee diiwaangelinta dhulka.
Inkastoo in habar- of RENOT beddeleen waqtiyo kala duwan, fikradda weli la mid ah ay u baahan yihiin khariidado rinji in ay waajib, "shuruudaha sharci xaq mabaadi'da ogolaansho, advertising qaaska ah iyo diiwaangelinta waa in si xeerarka jira amarka dadwaynaha ayaa ka muuqda guryaha gaarka loo leeyahay »
Mashruuca Qaran ee Maareynta Macluumaadka (INDES)
Dabcan, ma ahan wax walba si sahlan loo fuliyo. 2002, mowduuca kaabayaasha xogta xogta ayaa ahaa mid aad u hooseeya, ugu yaraan dalalkaas oo awoodda hay'adeed iyo deeqda waxbarasho ee jaamacadaha aysan wax yar bixin. Waqtigaas, nidaamka afaraad waxaa la yiraahdaa Clearinghouse, siddeed cisho oo xasuusinaya matoorada raadiyaha caanka ah. Sanadka aan u baahanahay in aan dib u habeyno, waxaan ugu yeeraa National Infrastructure Data Infrastructure (INDES).
SINAP ma u qalantay dadaalka?
SINAP ayaa la sheegay in xaalado kala duwan oo caalami ah, inkasta oo aan kala bixiyc gaar ah, xanuunka qorayaasha, kuwaas oo jeclaan lahaa in gargaarka ay hoos hab waddani. Si aad u noqoto qof ku dhashay ka xoq miiska galaas oo ah koob yar oo bunka dalka dhibaatooyinka musuqmaasuqa iyo bacdi siyaasadeed oo la mid ah in dalal badan oo ka mid ah macnaha Hispanic sigaar cabbin, SINAP waa mashruuc lagu dayan karo siyaabo badan. Oo ka mid ah afar-hoosaadyo, HUBSO ahaa mid ka mid ah oo ahaa wanaagsan awoodaan inay sostenibillidad, maxaa yeelay, horumarinta la sameeyey waqti diiwaanka sida waswaaska ahaayeen habar- iyo sababta oo ah waxay soo duuduubo doonaa aflagaadeeyay jihooyin badan u ololaynaya sharciyo cusub iyo isbadal hay'adaha, waxa aan sahlanayn (ama lagugula talin karo) in uu fuliyo waddan kasta; inkasta oo ay tani waa ku boodaan caqabadaha aanay u taabto code sokeeye (taas oo mid ka mid ah biilka doonista kuwan), iyo saamaynta xadidan on mustaqbalkiisa Cadastre-Registral, inkasta oo uu ka mid ahaa in shahaadooyinka xirfadeed.
Sida for koritaanka hay'adaha ay jiraan caqabado badan oo tan iyo markii dhidibada loo soo daahay ee mashruuca, la'aanta ah ee xirfad dadka rayidka ah iyo shaqaalaha la filanayn ururka ayaa horseeday dhow inay burburto ah daqiiqado ugu quruxda leh ee Institute Property ah; Si kastaba ha ahaatee, sida madal technology ixtiraam HUBSO in uu u ogolaaday in ay sii wadaan ka hawlgala sida madal rasmi ah u qalmaa.
Nidaamka bilaashka ah ee wakhtigaas lama arag dhar qotodheer, sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ahayd in la isticmaalo tiknoolajiyad mug leh oo badan, si loo siiyo tusaale:
Maareynta dhijitaalka ah waxaa lagu sameeyay horumarinta VBA, laga bilaabo diiwaangelinta ballaaran, diiwaanka taariikhda DGN V8, oo leh kantarool jeeg ah oo la adeegsanayo ProjectWise,
Isticmaalka Isticmaalka ActiveX websaydhka, dadka isticmaala dawladaha hoose ayaa codsaday dayactirka dayactirka iyadoo la isticmaalayo DGN redline, GeoWeb Publisher iyo lite Web explore.
Dhalashada shahaadada cadawga waxaa laga sameyn karaa macmiilka Microstation Geographics, oo soo saarey khariiradda, xogta cadawga iyo shaxda koorsada kaliya adoo dooranaya furaha cadawga; halka internetka laga yaabo in la abuuro iyadoo la adeegsanayo Publisher GeoWeb, shakhsi ahaan ama si weyn, soo saarida faylasha PDF PDF oo ay ku jiraan xogta alfasaymar iyo graphic.
Baadhitaanka iyo soo saarista buugaagta diiwaanka ayaa lagu sameeyey codsiyada tooska ah ee u noqday hawshaan culus oo lagu soo rogay geedi socodka aquila, kaas oo markii dambe laga soo saarey shirkado gaar ah.
Mawduuca macaamilka ee cadastral iyo xaqiiqda dhabta ah ayaa la sameeyey si dhammeystiran webka.
Waxaa laga yaabaa in adeegsiga tiknolojiyada oo dhan, kuwaas oo dhan users iyo heerka qalabaynta isaga kasbadeen sanadka BeAwards ah (maanta BeInspired) abaalmarinta deegaanka maamulka category iyo 2004 ee category Dowladda 2005. Laakiin imtixaanka dhabta ahaa markii uu soo wajahay isbedel siyaasadeed 2006 xisbi oo kala duwan iyo dhammaan kuwa tabaha dhaqanka ee bacdi siyaasadeed iyo rabitaan ay u masixi wax kasta oo ay bilowdo ka xoq.
Mid ka mid ah subax yimid disk dibadda (waxa ay ahaayeen cusub waqti) si ay sheegayaan in ay ku badbaadi on in disk Unified diiwaannada ... way joojiyeen weydiinaya markii ay xaqiiqsadeen in ay u baahan tahay lahaa saxannada badan oo dibadda ah.
subax kale, qof la yiraahdo maamulaha maamulka user ee database. Laba maalmood ka dib ayuu illoobeen furaha, iyo tan loo baahan yahay saddex maalmood oo kasta si ay u bilaabaan database ka dib markii iswada habeenbadhkii ku hayaan ahaa, maxaa yeelay, wakhtigaas ma uu jirin virtualization server iyo replica ahaa firfircoon sida uu sameeyey taageero u dhexeeya habeen 12 6 iyo subax.
Nidaamyada hore u isticmaalay nidaamka ayaa bilaabay inuu cabasho, ka dibna wiilku wuxuu xaqiiqsaday in Nidaamka uu ka badan yahay shaashado wanaagsan oo lagu riyaaqo PowerPoint Presentations.
Waxaa hubaal ah in qaladaadka la sameeyey ay jiraan casharro waxtar badan oo isticmaala kala duwan ee ka qaybgalayaashu ka qaybqaadan karaan heerka fahamka, naqshadeynta, horumarka, dokumentiyada, fulinta iyo hay'adeynta. Marka nidaamku yahay mid cusub, oo dadku ka qaybgalaan, fursadaha ka dambeeya waayo-aragnimadan waxay beddelaan noloshooda, ka baxsan aqoonta la helay.
Maxaa looma diidi karo go'aanka Honduras, oo leh SINAP, waa tan marxaladda waqtiga, aragtida bilowga ah isma bedelin. Nidaamka ayaa ku guulaystay in uu ka badbaado saddexda xilli ee dawladeed, oo ay ku jirto darbada (2009); xilligaan waxaa jiray fursado fashilmay, laakiin codsiga mabda'a dareenka caadiga ah wuxuu ahaa muhiimhaddii aad doonayso inaad sameyso nidaam weyn, u sii shaqee si dhakhso ah«; markii ay rabeen in ay ku noqdaan buugaag, waxay isticmaaleen isku mid ah difaacay. 16 hadda waxaa lagu casriyeynayaa degmooyinka 24, kuwaas oo horay u shaqeyn jiray nidaamka. In 2013 qorshe horumar la sameeyey si ay u haajiraan si ay boosteejo ah oo cusub oo dhan kuwa sifooyinka ayaa hoos, ku daraan software il furan si loo hagaajiyo code waaritaanka, iyo dheellitirka model ganacsiga diyaariyaan isdhexgalka of operator gaar ah, la qabsiga heerka LADM iyo Tiknooloojiyada BlockChain si loo hubiyo xogta. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu muhiimsanaa ayaa ahaa baakadaha xogta xogta, Carar ka kiciya, sidaas darteed haddii geometry cusub waxaa lagu diiwaangeliyaa xeerarka la xiriirinaya (sida meelaha la ilaaliyo cusub), si toos ah oo dhan sirqoollada dalka waxaa saameeyey oo u muuqata sida heegan ka hortag ah oo ku saabsan beeraha diiwaanka; teknoolajiyada furan sida OpenLayers, GeoServer iyo GEONETWORK si uu u bedelo GeoWeb Daabacaadda BentleyMap si uu u bedelo code Microstation Geographics waxaa sidoo kale lagu daro, Degmooyinka, adeegyada webka ayaa loo sameeyay si ay ula shaqeeyaan WFS iyada oo loo marayo plugiga QGIS.
Jaantuska soo socda waxaan qabsadey waddada SINAP wakhtiga, oo raadineysa inay ka adkaato labadaas Hadalka Catastro 2014 Waxay aan weli la adkaado, ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo shaqada dadweynaha wada, kaas oo la qaato soo jeedinta ku qayrul for iskaashi dadweynaha gaar ah oo dhiig-miirashada weyn ee sirdoonka ganacsiga u ogolaanaya kharashka si buuxda recoverable.
Marka la eego aragti cusub, nidaamyada SINIT iyo RENOT looma baahna nidaamyo dheeraad ah, sida ay soo jeedisay 2004 ee xakamaynta farsamada iyo xukunka awoodda. SINIT waa hal diiwaan oo dheeraad ah oo SURE ah (Diiwaanka Diiwaanada) iyo RENOT Diiwaanka Diiwaangelinta; Nidaamka cusubi wuxuu weli ku jiraa geedi socodka horumarinta; Sawirkaan soo socda ayaa ka tarjumaya waxyaallo kaabayaal farsamo.
Haddii arrimuhu ay sii wadaan xawaaraha ay qaadanayaan, SINAP waxay awood u yeelan doontaa in ay fuliso qorshaheeda oo ka bilowdey iyada oo la eegayo fikradda Xarumaha Associated; oo ah diiwaangelin iyo diiwaangelin caddayn oo kaliya oo ku dhex leh a nidaam dhexe oo hoos yimaada nidaamka xafiiska gadaashiisa.
Sidaas daraadeed, degmooyinka ayaa ka masuul ah cusbooneysiinta qorista iyo bixinta adeegyada la xiriira macaamilka; Waqtigan xaadirka ah, dhowr degmo ayaa ka shaqeynaya nidaam wafdi ah, macaamilada deynta ayaa horeyba u shaqeeyeen bangiyada qaarkood, sida xafiisyada maqalka, sida Diiwaanka Mercantile oo ay maamusho Rugta Ganacsiga iyo musharax u shaqeynaya wax ka badan ...
Dhab ahaan xooga weyn ee SINAP waxay noqon doontaa waqti dheer, la'aanta gabayada ka hadasha suurtagalka ay ka iman karto heerarka asaasiga, farsamada iyo farsamada. Nasiib darro, iyada oo tixgelinaysa inay tahay calanka ugu horreeya ee LADM, ka hor inta aysan ahayn heer (CCDM); mudnaanta in dalalka kale sida Colombia ay qaadan doonaan, halkaas oo noocan oo kale ee sharaf leh ma joojiyaan qaadashada faa'iidada iyo waxa lagu geliyey siyaasadda dadweynaha, sida muuqata in CONPES 3859.
Casharrada laga bartay SINAP waa ugu yaraan 8 qaar ka mid ah, oo aad u qiimo badan ... isagoo qayb ka ahaa qiiqaasu waa mid qiimo leh. Waxaa jiri doona wakhti aad kaga wada hadashaan, dhammaadka farxad ee sanadka 2016.
Post Previous«Previous Allplan: 4 2017 balanqaaday bilowgii cusub
Post Next Bentley Systems - Siemens: istiraatiijiyad A loogu talagalay in Internet waxyaalahaNext »
2 Jawaab ah "Nidaamka Qaranka ee Maamulka Hantida SINAP"
Taasi waa sax, nooca cusub, kaas oo wali ku jira horumarintiisa, waxaa ku jira adeegyo si kuwa adeegsada ee wax cuna, u cusboonaysiiya oo u baahiya macluumaadka ku saabsan maaraynta dhulalka ay u midoobaan. Mid ka mid ah tusaalaha noocan oo kale ah waa Dawladda Hoose ee SIT, oo ay degmooyinku ku qaban karaan dayactirka jiritaanka mashiinka Cadastre, laakiin sidoo kale waxaa ku jira cutubka qorshaynta dhuleed oo ay ku dhex dari karaan qorshahooda qorshaynta.
Francisco Puga isagu wuxuu leeyahay:
Awesome Xitaa kuma maleynayo dhibaatooyinka ku saabsan fulinta mashruuc la mid ah. Miyaad u aragtay suurtogalnimada inaad kaala tashato macluumaadka adoo u maraya API? Tani waxay suurtogal u noqon kartaa wakiillada kale, sida NGO-yada ka shaqeeya qorsheynta dhuleed ee waddanka, si ay u dhexgalaan shaqadooda si siman oo leh cidda qaranku.